Abathengisi be-Apple 100% bazibophelele kumandla ahlaziyekayo | Ndisuka mac
Kudliwanondlebe noLisa Jackson bavela eApple, skwaye ibhengeze ukuba inkampani ifikelele kwi-96% kwimveliso ngamandla ahlaziyekayo. Oku kubonisa amanye amanqaku amathathu xa kuthelekiswa no-2015. Ipesenti yempumelelo iyahluka ngokuxhomekeke kwindawo yehlabathi. E-United States, nakwamanye amazwe angama-23, ukusetyenziswa kwala mandla yi-100%. Ke ngoko, inkampani ijolise ngqo kwezinye iindawo zehlabathi, icela ababoneleli bayo ukuba bazibophelele ekuphunyezweni kwamandla ahlaziyekayo kuzo zonke iifektri zayo, nakwiinkqubo ezahlukeneyo.
U-Apple uqalile ngokucela ukuzibophelela ku: IBiel Cristal Fábrica Ltd., iSunwoda Elektroniki Co kunye neCompal Electronics Inc. Sele zibhengeze ukujoyina iinjongo zokuzinza ezifunekayo yiApple. Ngamazwi kaJackson:
Ngoku kukho amalungu asixhenxe kwicandelo lethu lonikezelo abathe bazibophelela ekwenzeni imisebenzi yabo ngamandla ahlaziyekayo
Ifama yamandla eSola yeApple
Isibambiso samandla ahlaziyekayo satyikitywa ngu-Apple phantsi kolawulo luka-Obama. Umongameli wangoku unokuguqula eminye imigaqo ye-EPA. Nangona kunjalo uApple uthathe isigqibo sokuqhubeka nenkqubo. Iinkampani ezisayine ingxelo edibeneyo emva komyalelo kaTrump.
Siyakholelwa ekubeni amandla ombane azinzileyo kunye nemigaqo-nkqubo yemozulu, enje ngesicwangciso samandla acocekileyo, angenza umbane ohlaziyekayo womelele ngakumbi ebusweni besoyikiso esibi sokutshintsha kwemozulu ngelixa ixhasa ukhuphiswano lwaseMelika, into entsha kunye nophuhliso.
Akukhange kuthiwe kangangezihlandlo ezininzi, kwiqela leenkampani eziphambili kwihlabathi liphela, njengenye yeenkampani ezicocekileyo. Oku kuye kwaqatshelwa ngokunikezelwa kwamabhaso awahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Abathengisi be-Apple 100% bazibophelele kuhlaziyo